Ahemfo bɔne ho atemmusɛm (1-30)
Nea ɛfa Salum ho (10-12)
Nea ɛfa Yehoiakim ho (13-23)
Nea ɛfa Konia ho (24-30)
22 Nea Yehowa aka ni: “Sian kɔ Yuda hene fi,* na kɔka asɛm yi. 2 Ka sɛ, ‘O Yuda hene a wote Dawid ahengua so, tie Yehowa asɛm, wo ne wo nkoa ne wo manfo a wɔfa apon yi mu no. 3 Nea Yehowa aka ni: “Mummu atɛntrenee, na monyɛ adetrenee. Munnye nea wɔresisi no mfi osisifo nsam. Monnteetee ɔhɔho biara, na monnyɛ agyanka anaa okunafo biara bɔne.+ Na munnhwie mogya a edi bem biara nngu wɔ ha.+ 4 Sɛ mohwɛ di asɛm yi so a, ɛnde ahemfo a wɔbɛtena Dawid ahengua so,+ ne wɔn nkoa, ne wɔn manfo bɛtenatena nteaseɛnam mu ne apɔnkɔ so, na wɔbɛfa ofi yi apon mu.”’+ 5 “‘Na sɛ moantie asɛm yi a,’ Yehowa asɛm ni, ‘meka me ho ntam sɛ ofi yi bɛsɛe pasaa.’+ 6 “Nea Yehowa aka afa Yuda hene fi ho ni:‘Wote sɛ Gilead ma me,Na wote sɛ Lebanon mmepɔw atifi. Nanso mɛma woadan sare so;Wo nkurow no baako mpo nni hɔ a obi bɛtena mu.+ 7 Na meyiyi asɛefo* ama wɔaba wo so;Obiara de n’akode bɛba.+ Na wo sida nnua papa paa no, wobetwitwa agu,Na wɔatow agu ogya mu.+ 8 “‘Na aman pii betwam wɔ kurow yi ho, na obiara bebisa ne yɔnko sɛ: “Adɛn nti na Yehowa ayɛ kurow kɛse yi sɛɛ?”+ 9 Na wɔbɛka sɛ: “Efisɛ wogyaw Yehowa, wɔn Nyankopɔn apam no too baabi, na wɔkɔkotow anyame foforo, na wɔsom wɔn.”’+ 10 Munnsu nea wawu no,Na mommma ɔnnyɛ mo mmɔbɔ. Nea ɔrekɔ no mmom na munsu no paa,Efisɛ ɔrensan mma bio mmehu asaase a wɔwoo no wɔ so no. 11 “Nea Yehowa aka afa Yosia ba Salum,*+ Yuda hene a odii ne papa Yosia+ ade a wafi ha kɔ no ho ni: ‘Ɔrensan mma ha bio. 12 Efisɛ baabi a wɔasoa no kɔ no, ɛhɔ na obewu, na ɔrenhu asaase yi bio.’+ 13 Nea osi ne fi, nanso ɛnyɛ trenee so,Na osi n’abansoro nanso ɛnyɛ atɛntrenee so,Na ɔma ne yɔnko nipa yɛ adwuma kwaA ɔmfa n’akatua mma no no, nnome nka no.+ 14 Ɔno na ɔka sɛ, ‘Mesi ofi a emu soA ɛwɔ abansoro adan akɛse. Mesisi mfɛnsere wɔ mu,Na mede sida nnua bɛsɛm mu, na mede adukɔkɔɔ aka mu.’ 15 Wode sida nnua pii yɛ adwuma sen obiara, enti ɛyɛ wo sɛ wobɛkɔ so adi hene anaa? Wo papa nso didii, na ɔnomee,Nanso ɔno de, obuu atɛntrenee, na ɔyɛɛ adetrenee.+Na esii no yiye. 16 Odii mmɔborɔwa ne ohiani asɛm maa wɔn.Ɛno nti biribiara kɔɔ yiye. ‘Ɛnyɛ ɛno na ɛkyerɛ sɛ obi nim me anaa?’ Yehowa asɛm ni. 17 ‘Na wo de, ade a w’ani ne wo koma di akyi ara ne sɛ wubenya mfaso bɔne,Na woahwie nnipa a wɔn ho nni asɛm mogya agu,Na woasisi nkurɔfo abɔ wɔn apoo.’ 18 “Enti nea Yehowa aka afa Yosia ba Yehoiakim+ a ɔyɛ Yuda hene ho ni,‘Wɔrensu no nka sɛ: “O me nuabarima! O me nuabea!” Wɔrensu no nka sɛ: “O yɛn wura! O otumfo!” 19 Wobesie no sɛnea wosie afurum,+Wɔbɛtwe no ase, na wɔatow no akyene,Wɔbɛtow no akyene Yerusalem kurow apon akyi.’+ 20 Foro kɔ Lebanon na kosu.Ma wo nne so wɔ Basan,Na teɛm fi Abarim,+Efisɛ wɔabubu w’adɔfo a wɔnte wo ho gyae no nyinaa pasapasa.+ 21 Bere a na wowɔ asomdwoe no, mekasa kyerɛɛ wo. Nanso wokae sɛ, ‘Merentie.’+ Saa ara na woayɛ fi wo mmabunbere mu,Na wuntie me nne.+ 22 Mframa na ɛbɛyɛn wo nguanhwɛfo nyinaa,+Na w’adɔfo a wɔnte wo ho gyae no, wɔbɛkyere wɔn akɔ. Ɛhɔ na w’ani bewu ama animguase aka wo, w’amanehunu no nyinaa nti. 23 O wo a wote Lebanon,+A woayɛ wo berebuw wɔ sida nnua mu.+Sɛ awo mu yaw* ba wo so a, wobɛpenepene paa!Na sɛ ɛyaw* ba wo so te sɛ ɔbea a ɔrewo a, wubehu amane sɛ!”+ 24 “‘Bere a mete ase yi,’ Yehowa asɛm ni, ‘sɛ Yehoiakim+ ba, Yuda hene Konia,*+ yɛ ahyɛnsode kawa a ɛhyɛ me nsa nifa mpo a, anka mɛworɔw wo afi me nsa! 25 Na mede wo bɛhyɛ wɔn a wɔpɛ sɛ wokum wo* no nsa, ne wɔn a wusuro wɔn no, ne Babilon hene Nebukadnesar,* ne Kaldeafo no nsa.+ 26 Mɛtow wo ne wo maame a ɔwoo wo akɔ asaase foforo so, baabi a ɛnyɛ hɔ na wɔwoo wo, na ɛhɔ na mubewu. 27 Na asaase a wɔn ani agyina sɛ wɔbɛsan akɔ so no,* wɔrensan mma so bio da.+ 28 Saa ɔbarima Konia yi, ɔyɛ kuku a obiara mfa nyɛ hwee a abubu pasaa anaa?Ɔyɛ kuku a obiara mpɛ anaa? Adɛn nti na wɔatow ɔne n’asefo agu fam,Na wɔatow wɔn agu asaase a wonnim so so yi?’+ 29 O asaase, asaase, asaase, tie Yehowa asɛm. 30 Nea Yehowa aka ni: ‘Monkyerɛw ɔbarima yi ho asɛm sɛ onni ba,Monkyerɛw ne ho asɛm sɛ ɔbarima a ɛrensi no yiye wɔ ne nkwa nna nyinaa mu,Efisɛ n’aseni biara nni hɔ a ebesi no yiyeAma watena Dawid ahengua so adi ade wɔ Yuda bio.’”+
^ Nt., “mehyira asɛefo so.”
^ Ɔno ara na wɔfrɛ no Yehoahas no.
^ Nt., “awo mu yaw.”
^ Anaa “wɔpɛ sɛ wogye wo kra.”
^ Anaa “asaase a wɔma wɔn kra so kyerɛ no no.”